Iigawuni zeKlokočovo - I-Airbnb
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguPavel
Sinikezela ngendawo yokuhlala kwindawo entle kwicala laseSlovakia kwiiNtaba zaseBeskydy, eFlorida. Iikhilomitha eziyi-6 ngaphaya komda weSlovakia. Indlu esemaphandleni ikwindawo encinci yokuhlala "UŘliskov" endulini. Ayinawo amanzi (amanzi acocekileyo acocekileyo yi-120 m ukusuka kwindlu esemaphandleni) okanye unxibelelwano lombane (izibane kunye neparafini namakhandlela). Indawo yahlukile kuba eli cala leBeskydy Mountains alikho njengeRiphabliki yaseCzech. I-GPS gagging: 49.43 AtlanN, 18.59476E
I-gag inefenitshala yexesha. Iphekwe kumpheki wegesi. Kukho udonga oluncinci lokunyuka kwisakhiwo. Le ndlu isemaphandleni inethoyilethi eyomileyo yakudala. Kukho nomthi owenziwe ngamaplanga ukuze kufudunyezwe indawo yangaphakathi kwisitovu seenkuni. Kwiholo kukho ibhedi elala abantu ababini + oomatrasi ababini abongezelelekileyo. Kukho iseli encinci phantsi komgangatho we-sauna, apho amaqondo obushushu ahlala ephantse abe yi-10 degrees unyaka wonke. Ngasemva kwendawo yokubasa umlilo (iinkuni ezisuka ehlathini elikufutshane zisetyenziselwa ukutsha) + iindawo zokuhlala. Ijikelezwe ziinduli ezinkulu ezintle namahlathi agcwele amakhowa ebudeni bexesha lonyaka. Ukuqubha kunokwenzeka kwiikhilomitha eziyi-1 ezikude zomlambo i-Redmierance okanye ngqo kwiqula elikufutshane.
Kukho iindlela ezininzi ezintle zokunyuka intaba kule ndawo. Iikhilomitha eziyi-9 ukusuka e-gagging yindawo encinci ekhuselekileyo "Klokočovské sklálie", esincomela ukuba uyityelele. Ebusika kunokwenzeka ukuba usebenzise indawo ekude yeekhilomitha eziyi-14 ze-ski eBílá (kwicala laseCzech). Ukutyibilika ekhephini nokutyibilika ekhephini baza kuyifumana indlela.
Ngamalungiselelo angaphambili ngefowuni (Inombolo yefowuni iza kuboniswa emva kokuba ukuqinisekisile ukubhukisha kwakho) uza kwamkelwa phambi kwendlu esemaphandleni ngumntu oncedisa ekubukeni iindwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Klokočov